အထီးကျန်မှုကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်မလဲ ? – Gentleman Magazine
အထီးကျန်မှုကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်မလဲ ?
အထီးကနျြမှုကို ဘယျလိုဖွဖြေောကျမလဲ ?
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်ရုံးပတ်ရက်က ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေခဲ့သလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးက အလုပ်များနေတာ ခရီးဝေးသွားနေကြတာနဲ့ မအားလပ်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ အခြားမြို့တစ်ခုမှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး စကားစမြည်ပြောဖို့ ဒါမှမဟုတ် အနားက စားသောက်ဆိုင်သစ်တစ်ခုကိုသွားပြီး မြည်းစမ်းကြည့်ရင် ကောင်းမလား တွေးလိုက်မိပေမယ့် တကယ်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဖုန်းကိုပိတ်ထားပြီး နှစ်ရက်လုံးကို စာအုပ်ဖတ်နေလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရဲ့ အထီးကျန်နေတဲ့ ခံစားချက်ကို လျော့ပါးသွားအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ တနင်္လာနေ့ရောက်ပြီး အလုပ်ထဲရောက်မှသာ အားလုံးပုံမှန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်လိုပဲ အထီးကျန်တဲ့သူအများစုက လူမှုရေးအစီအစဉ်တွေ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းဖို့ အခွင့်အရေးရှိပေမယ့် တကယ်တမ်းကြတော့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာများတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လေလေ အထီးကျန်မှုကို ပိုပြီးတော့ ခံစားရလေပဲဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ အထီးကျန်နေချိန်မှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တမူထူးခြားစွာ လုပ်ဆောင်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထီးကျန်သူတွေရဲ့ ဦးနှောက်အတွင်း လျှပ်စီးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အထီးမကျန်တဲ့သူတွေထက် ပိုပြီးမြန်ဆန်ပြင်းထန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အထီးကျန်မှုကို ခံစားနေရသူတွေဟာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ပိုပြီးတော့ ဝေးဝေးသွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အထီးကျန်သလိုခံစားလာရပြီဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေရဖို့ အခြေအနေ ကြုံလာရတော့မယ်ဆိုရင် သီးသန့်ခွဲထွက်နေချင်စိတ်ကို ဖျောက်ဖျက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တကယ်တော့ အထီးကျန်မှုနဲ့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာနဲ့က မတူပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ယောက်တည်းနေရတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အထီးကျန်မှုဆိုတာကတော့ လူမှုဝန်းကျင်အတွင်းမှာ သီးခြားဖြစ်နေသလို ခံစားရတဲ့အခါမှာ ဒါမှမဟုတ် ခင်မင်နီးစပ်သူတွေနဲ့ ဝေးကွားနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အထီးကျန်မှုကို သတိထားတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထီးကျန်မှု ခံစားရနိုင်ခြေတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူမှုဝန်းကျင်အတွင်းမှာ အထီးကျန်မှုကို ခံစားနေရပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုနေပြီဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို သိပ်အဖက်မလုပ်ပဲ ဘာသိဘာသာနေနေတယ် ဆိုရင် သူ့ကို ထိခိုက်မိအောင် ဘာလုပ်ထားမိလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြုပြင်ပြီး အထီးကျန်မှုကို ဖြေဖျောက်ရာမှာ အဆင့်လေးခု ရှိပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း သီးခြားခွဲထွက်နေသ၍ ဘယ်သူနဲ့မှ ဆက်သွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနက် အွန်လိုင်းကိုလည်း အားမကိုးပါနဲ့။ အဲဒီမှာက အမှန်တရားနည်းလွန်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူမှုရေးအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားမှုတွေကို လက်ခံပါ။ စိတ်ထဲက မသွားချင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ရောက်အောင်သွားပါ။
လာဖိတ်တဲ့ အခမ်းအနားတွေ၊ ပွဲတွေသွားနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ပြက္ခဒိန်ကို ယူပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲပါ။ သီတင်းပတ်တစ်ခုလုံးမှာ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေပါစေ။ သွားစရာမရှိဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ပွဲတစ်ခုကို စီစဉ်ပြီး အခြားလူတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ။
စိတ်ဝင်စားမှုချင်း၊ ၀ါသနာချင်း၊ အယူအဆချင်း တူညီတဲ့သူတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးတာက အထီးကျန်မှုကို ဖြေဖျောက်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အနားမှာ ကိုယ်နဲ့ ၀ါသနာချင်း တူတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင် ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ဝါသနာပါရင် စာပေအသင်းတစ်ခုကို ၀င်လိုက်ပါ။ အပြေးဝါသနာပါရင် အပြေးသမားအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေချိန်မှာ အခြားသူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အထင်အမြင် မှားတတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ကို တကယ်ပစ်ထားလိုက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိစ္စတွေနဲ့ သူတို့ အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတာလား။ အခြားသူတွေကို အကောင်းဘက်ကပဲ တွေးပေးလိုက်ပါ။
လှနျခဲ့တဲ့ အပတျရုံးပတျရကျက ကြှနျတျောတဈယောကျတညျးအထီးကနျြနခေဲ့သလို ခံစားခဲ့ရတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှဖေို့ စဉျးစားကွညျ့လိုကျတော့ အားလုံးက အလုပျမြားနတော ခရီးဝေးသှားနကွေတာနဲ့ မအားလပျကွဘူးဖွဈနတေယျ။ အခွားမွို့တဈခုမှာနတေဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျဆီသှားပွီး စကားစမွညျပွောဖို့ ဒါမှမဟုတျ အနားက စားသောကျဆိုငျသဈတဈခုကိုသှားပွီး မွညျးစမျးကွညျ့ရငျ ကောငျးမလား တှေးလိုကျမိပမေယျ့ တကယျမလုပျဖွဈခဲ့ပါဘူး။ ဖုနျးကိုပိတျထားပွီး နှဈရကျလုံးကို စာအုပျဖတျနလေိုကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောရဲ့ အထီးကနျြနတေဲ့ ခံစားခကျြကို လြော့ပါးသှားအောငျ မစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ဘူး။ တနင်ျလာနရေ့ောကျပွီး အလုပျထဲရောကျမှသာ အားလုံးပုံမှနျဖွဈသှားခဲ့တယျ။
ကြှနျတေျာ့လိုပဲ အထီးကနျြတဲ့သူအမြားစုက လူမှုရေးအစီအစဉျတှေ၊ သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးဖို့ အခှငျ့အရေးရှိပမေယျ့ တကယျတမျးကွတော့ မလုပျဖွဈခဲ့ကွတာမြားတတျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈလလေေ အထီးကနျြမှုကို ပိုပွီးတော့ ခံစားရလပေဲဖွဈပါတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရ လူတှရေဲ့ ဦးနှောကျဟာ အထီးကနျြနခြေိနျမှာ လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို တမူထူးခွားစှာ လုပျဆောငျတတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အထီးကနျြသူတှရေဲ့ ဦးနှောကျအတှငျး လြှပျစီးလှုပျရှားမှုတှဟော အထီးမကနျြတဲ့သူတှထေကျ ပိုပွီးမွနျဆနျပွငျးထနျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အထီးကနျြမှုကို ခံစားနရေသူတှဟော လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ ပိုပွီးတော့ ဝေးဝေးသှားတတျတာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အထီးကနျြသလိုခံစားလာရပွီဆိုရငျ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျတညျးအထီးကနျြနရေဖို့ အခွအေနေ ကွုံလာရတော့မယျဆိုရငျ သီးသနျ့ခှဲထှကျနခေငျြစိတျကို ဖြောကျဖကျြနိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
တကယျတော့ အထီးကနျြမှုနဲ့ တဈယောကျတညျးဖွဈနတောနဲ့က မတူပါဘူး။ တဈခါတဈလမှော တဈယောကျတညျးနရေတာက ပိုကောငျးပါတယျ။ အထီးကနျြမှုဆိုတာကတော့ လူမှုဝနျးကငျြအတှငျးမှာ သီးခွားဖွဈနသေလို ခံစားရတဲ့အခါမှာ ဒါမှမဟုတျ ခငျမငျနီးစပျသူတှနေဲ့ ဝေးကှားနတေဲ့အခါမြိုးမှာ ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။
ဒီတော့ အထီးကနျြမှုကို သတိထားတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အထီးကနျြမှု ခံစားရနိုငျခွတှေကေို စောငျ့ကွညျ့ပွီး ကွိုတငျကာကှယျမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ လိုပါတယျ။ လူမှုဝနျးကငျြအတှငျးမှာ အထီးကနျြမှုကို ခံစားနရေပွီဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးကို ပွနျလညျသုံးသပျဖို့ လိုနပွေီဆိုတဲ့ သဘောဖွဈပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ သူငယျခငျြးမိတျဆှတေဈယောကျက ကိုယျ့ကို သိပျအဖကျမလုပျပဲ ဘာသိဘာသာနနေတေယျ ဆိုရငျ သူ့ကို ထိခိုကျမိအောငျ ဘာလုပျထားမိလဲဆိုတာကို အရငျဆုံးပွနျလညျဆနျးစဈရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ကိုယျ့ရဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးအခွအေနကေို ပွနျလညျဆနျးစဈပွုပွငျပွီး အထီးကနျြမှုကို ဖွဖြေောကျရာမှာ အဆငျ့လေးခု ရှိပါတယျ။
တဈယောကျတညျး သီးခွားခှဲထှကျနသေ၍ ဘယျသူနဲ့မှ ဆကျသှယျနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ အငျတာနကျ အှနျလိုငျးကိုလညျး အားမကိုးပါနဲ့။ အဲဒီမှာက အမှနျတရားနညျးလှနျးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူမှုရေးအခမျးအနား ဖိတျကွားမှုတှကေို လကျခံပါ။ စိတျထဲက မသှားခငျြဘူးဆိုရငျတောငျမှ ရောကျအောငျသှားပါ။
လာဖိတျတဲ့ အခမျးအနားတှေ၊ ပှဲတှသှေားနရေုံနဲ့ မလုံလောကျပါဘူး။ ပွက်ခဒိနျကို ယူပွီး လူမှုဆကျဆံရေးအတှကျ ကိုယျပိုငျအစီအစဉျကို ရေးဆှဲပါ။ သီတငျးပတျတဈခုလုံးမှာ လူမှုရေးလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နပေါစေ။ သှားစရာမရှိဘူးဆိုရငျလညျး ကိုယျတိုငျပှဲတဈခုကို စီစဉျပွီး အခွားလူတှကေို ဖိတျချေါလိုကျပါ။
စိတျဝငျစားမှုခငျြး၊ ဝါသနာခငျြး၊ အယူအဆခငျြး တူညီတဲ့သူတှနေဲ့ အခြိနျကုနျဆုံးတာက အထီးကနျြမှုကို ဖွဖြေောကျနိုငျတဲ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ ကြှနျတျောတို့အနားမှာ ကိုယျနဲ့ ဝါသနာခငျြး တူတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရငျ ရှာဖှရေမှာဖွဈပါတယျ။ စာဖတျဝါသနာပါရငျ စာပအေသငျးတဈခုကို ဝငျလိုကျပါ။ အပွေးဝါသနာပါရငျ အပွေးသမားအဖှဲ့တှနေဲ့ ဆကျသှယျလိုကျပါ။
တဈယောကျတညျးအထီးကနျြနခြေိနျမှာ အခွားသူတှရေဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို အထငျအမွငျ မှားတတျပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှကေ ကိုယျ့ကို တကယျပဈထားလိုကျတာလား။ ဒါမှမဟုတျ သူတို့ကိစ်စတှနေဲ့ သူတို့ အလုပျအရမျးရှုပျနတောလား။ အခွားသူတှကေို အကောငျးဘကျကပဲ တှေးပေးလိုကျပါ။
Previous: မိန်းမတိုင်း သုတ်ရည် ပန်းထုတ်နိုင်ပါသလား
Next: သင် ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ဆက်မလိုက်သင့်တော့တဲ့ အခြေအနေ လက္ခဏာများ